Sture Bergwall ma la siideyn doonaa? - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Thomas Quick oo hadda lagu magacaabo Sture Bergwall. Sawirle: Yvonne Åsell/Scanpix.
Sture Bergwall ma la siideyn doonaa?
La daabacay tisdag 30 juli 2013 kl 17.20
Waxaa laga yaabaa in berri ninka lagu magacaabo Sture Bergwall, horayna loo oran jirey Thomas Quick, laga siidaayo dhammaan dembiyadii siddeedda dil ahaa oo horay loogu xukumay.
Dacwadda ugu dambeysey waxay ku saabsanayd dilkii Charles Zelmanovits oo magaalada Piteå laga waayey sannadkii 1976.
Maalinta arbacada oo berri ah gelinkeeda hore ayuu xeerilaaliyuhu go’aan ka gaari doonaa haddii dacwooyinkaan la baabi’inayo iyo haddii dib loogu celinayo maxkamadda. Haddii dacwooyinkaan hoos loo dhigo ama la baabi-iyo, kolkaas waxay maxkamaddu go’aamineysaa xukun siideyn ah.
Waxay ahayd maalintii markii Bergwall ku dacweeyey Hay’adda Gargaarka Bulshada dhakhtar sare oo ka hawlgala isbitaalka sharci u eegidda cudurada maskaxda. Bergwall wuxuu ku doodayaa in dhakhtarkani si ula kac ah uu maxkamadda ugu gudbiyey macluumaad aan sax ahayn oo isaga ku saabsan, kuwaas oo saamayn ku yeeshay qiimeynta ay maxkamaddu ku samayn lahayd in laga tirtiro dembiyada lagu eedeeyey.
Arrimahaan la xiriira Sture Bergwall waxaa loogu magac-daray fadeexadii xagga sharci oo ugu weyneyd oo ilaa hadda ka dhaca Iswidhen.
Horay ayey u dhacday in dad xabsi lagu xukumay gadaal laga siidaayo oo magdhaw la siiyo.
Wuxuu Mårten Schultz oo caalin ku takhasuusay sharciyada madaniga ah sheegay in ay dhici karto in aan Sture Bergwall la siin wax magdhaw ah maadaama uu qirtay in uu falalkaas dilka ah galay:
- Sida ku qoran sharciga gaarka ah oo khuseeya magdhawga la siinayo dadka si qaldan xorriyadooda looga qaaday, wuxuu qofku magdhawgaas waayayaa haddii uu isaga qudhiisu gacan ka geystey in xabsiga la dhigo. Waxaa gacan-ka-geysigaas ka mid ah haddii uu qirto dembi uusan gelin. Sture Bergwall wuxuu qirtay dembiyo uusan gelin.
Isha: TT/ Ekot